फागु पुर्णिमा | Bishow Nath Kharel
Posted on April 16, 2014 by bishownath
March 23, 2014Uncategorizedgautamsudina
उपत्यका र पहाडी जिल्लाहरुमा रंगिचंगी अविर लगाइ दिदै रंग छ्यापाछ्याप गरेर उल्लास पूर्वक होली पर्ब मनाईंदैछ । आपसी मेलमिलाप, सदभावनाको सन्देश दिने गरी मनाइने यो पर्व तराईमा भने त्यसको एक दिनपछि मनाइन्छ । सुदुरपश्चिममा समेत यस पर्वलाई विशेष रुपमा मनाउने गरिन्छ । बसन्त ऋतुको आगमनको सुरुआतमै यो चाड पर्छ ।
त्रेतायुगमा हिरन्यकश्यपु नामक दानवका छोरा प्रल्हाद भगवान विष्णुका भक्त थिए । उनलाई मार्न हिरण्यकस्यपुले धेरै प्रपन्च रचे । केही गर्दा मार्न नसकेपछि उनले आफ्नै बहिनी होलिकालाई मार्न पठाए । होलिकाले आगोमा नजल्ने बरदान पाएकी थिइन् । त्यसपछि होलिकाले प्रल्हादलाई काखमा लिएर आगोमा बसिन । आगोले प्रल्हादलाई केही गरेन होलिका भनें आगोमा जलेर नष्ट भइन् । त्यसैको खुशियालीमा अविरको होली खेल्दै फागु पूर्णिमा मनाउन थालिएको किम्बदन्ती छ । खासगरी हिन्दु समुदायले यसलाई महत्वपूर्ण चाडका रुपमा लिने गर्छन् । होलीमा रातो, हरियो, पहेंलो, निलोलगायतका विभिन्न रंगको टीका लगाइ मनाउने गरिन्छ ।
फागु पर्वमा सरकारले सार्बजनिक विदा दिने गरेको छ । पुर्णिमाको दिन काठमाडौं उपत्यका र पहाडी जिल्लामा विदा हुन्छ । तराई क्षेत्रमा भने त्यसको भोलिपल्ट चाड मनाइने भएकाले त्यसै दिन सार्बजनिक विदा दिइन्छ । तराईका बासिन्दाले यस चाडलाई निकै महत्व दिएर मनाउछन् । यस दिन मिठा परिकारहरु बनाएर आफन्तहरुलाई बोलाएर भोजन गराउने पनि गरिन्छ
रामजानकी बिबाह महोत्सव
आज बिबाह पञ्चमी । सप्ताहव्यापी रामजानकी विवाह महोत्सवको मुख्य आयोजन विवाह महोत्सवु मिथिलानगरी जनकपुरमा धूमधामका साथ मनाईदै छ । विवाह महोत्सवको मुख्य आयोजन अपरान्ह हुने भए पनि विहानैदेखि जानकी र राम मन्दिरसहितका मठ मन्दिरहरुमा दर्शनार्थीहरुको भिड लाग्छ । जानकी मन्दिरका महन्थको नेतृत्वमा जानकीको तथा राम मन्दिरका महन्थ राम गिरीको नेतृत्वमा रामको शोभा यात्रा निकालिन्छ । ऐतिहासिक बाह्रवीघा रंगभूमि मैदानमा दुबै डोलाको संगम हुनेछ । शोभा यात्रामा नगरका भद्रभलादमी, प्रहरी प्रशासनका उपल्ला पदाधिकारीहरु संगै अयोध्याबाट आएका सन्त महन्थहरु समेत सहभागी हुने परम्परा छ । बारहवीघाबाट निस्किने संयुक्त शोभा यात्रा नगर परिक्रमा गरी जानकी मन्दिर प्रवेश गर्नेछ । राती राम र सीताको बीच मिथिला विधि अनुसार विवाह हुनेछ ।
त्रेता युगमा राम जानकीको विवाह भएको अवसर पारी मंसिर शुक्ल पंचमीको दिन सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा प्रत्येक वर्ष विशेष महोत्सव आयोजन हुदै आएको छ ।
ठूली एकादशीमा तुलशाको मोठको पूजा गर्दै |
नेवार समुदायले आज साँझ परिवारका सबै सदस्य भेला भएर म्हः पूजा गर्ने चलन छ । नेवारी भाषामा म्हः भनेको शरीर हो । सम्पूर्ण नेवार समुदायद्वारा मनाइने म्हः पूजा नेपाली पर्वमध्ये विशेष पर्वका रुपमा रहिआएको छ ।
आफ्नो शरीरलाई परमात्मा मानेर आफूले आफूलाई आराधना गरी शरीरभित्रको चेतनालाई पूजा गर्ने यस पर्वको दार्शनिक पक्ष छ । समग्र देवता ऊर्जाशक्ति विश्व ब्रम्हाण्ड मानव शरीरभित्र रहेको विश्वास गर्दै परमेश्वरको बास हुने मान्यता राखी आफूलाई चिनेर बुझेर आफ्नो उद्धार गर्न आफै अघि सर्नुपर्ने परम्पराका रुपमा यो पर्व विकास भएको पाइन्छ ।
प्रत्येक वर्ष नेपाल संवतअनुसार कार्तिक शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथिमा नेवार परिवारमा परिवारको मूलीले परिवारका सबै सदस्यहरुको पूजा गरी हाँस वा कुखुराको फूल सगुन चढाइन्छ । शरीरमा शान्ति नभएसम्म आत्मशान्ति नहुने भएकाले म्हः पूजाको दिन शरीरलाई तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिन्छ । यसो गर्दा वर्षभरि चोट नलाग्ने र मन पनि शान्त हुने धार्मिक विश्वास छ । म्हः पूजा गर्न परिवारका प्रत्येक सदस्यको लागि पूर्वसम्मुख पारेर एक/एकवटा मण्डल बनाइँछ । मन्डलमा खाने तेलको सानो घेरालाई बीचमा पारी त्यसपछि क्रमशः बाहिर अक्षता, लावा, कालो भटमास, मासको गेडा, धान, बेसारले रंगाएको चामलको धूलो, त्यसपछि पानी र रंगीबिरंगी फूलका घेरा हालिन्छ ।
परिवारका सबै सदस्यलाई पुग्नेबाहेक म्हःपूजा गर्न बस्ने थकालीभन्दा अगाडि सुकुन्दा, त्यसपछि धर्मदूत र अन्त्यमा कर्मदूतको लागि भनेर पनि मन्डला बनाइन्छ । घरमा भएका नाङ्लो, कुचो, जाँतो, घ्याम्पो, घडा आदिका लागि पनि मन्डला बनाइन्छ । मन्डलाहरुको अगाडि परिवारको जेठोदेखि क्रमबद्ध भएर परिवारका सबै सदस्य बसेपछि परिवारका मूलीले सबैलाई पूजा गर्दै रातो अक्षताको टीका लगाइदिन्छन् । त्यसपछि मूलीले एक पाथी अटाउने काठको नाप्ने भाँडोमा अक्षता, फलफूलका टुक्राहरु, सिंगो सुपारी र खुद्रा पैसा राखेर प्रत्येकको शरीरमा तीन पल्ट अभिषेक गर्छन् ।
मण्डल छेउमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, यमराज, यमुनाको स्थापना गरिन्छ । आफ्नो शरीरका साथै ती देवी देवतालाई अक्षतालगायत सयपत्री फूलले पूजा गरिन्छ । नेवार समुदाय हिन्दू र बौद्धछ धर्मावलम्बी छन् । बौद्ध अनुयायीले भने म्हःपूजा केही फरक तरिकाले गर्छन् । यस सम्प्रदायमा विभिन्न नौ किसिमका गेडागुडीको प्रयोग गरी मण्डल निर्माण गरिन्छ । सौर्यमण्डल गोलो भएकाले सोहीअनुरुप विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी मण्डल निर्माण गरिन्छ । यमराज कुलदेवताको आराधना गरेर म्हः पूजासँगै दशै दिशाका लोकपालको पनि पूजा गरिने परम्परा छ।
आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात कुकुर तिहार । यस दिन कुकुरलाई मिठो खान दिएर माला लगाइदिई पूजा गरिन्छ ।
कुकुरलाई यमराजको द्वारपाल मानिन्छ । महाभारतको कथाअनुसार धर्मराज युधिष्ठिरले आफू स्वर्ग जाँदा सँगै कुकुरलाई पनि लगेका थिए ।
कुकुर स्वामीभक्त र इमान्दार प्राणी भएकाले पूजा गरिएको हो । यसले पाल्नेको नुनको सोझो गर्दै हिंस्रक जीवजन्तु, चोर, लुटेराबाट धनमाल र मानिसको सूरक्षा गर्छ । कुकुरले घरको रखवारी गर्छ । नीतिज्ञ चाणक्यले कुकुरलाई धेरै खान सक्ने भए पनि थोरै खाएर सन्तुष्टी लिने, मस्त निन्द्राबाट पनि तुरुन्तै ब्युँझन सक्ने, सरक्क गर्दा पनि थाहा पाइ हाल्ने, घ्राणशक्ति तेज भएको, स्वामिभक्त र सुरो प्राणी भनेका छन् ।
कुकुर तिहारका दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ । यस दिन एका बिहानै नदि, तलाउ, पँधेरा, धारालगायतका पानीको मुहान भएका ठाउँमा गएर तेल लगाएर नुहाउने, अपामार्ग टाउकोमा लगाउने गरिन्छ । नुहाएपछि यमराजका नाममा १४ वटा वत्ती बाल्ने गरिन्छ । यसो गर्दा नरक जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास छ ।
आज काग तिहार । दशैंपछिको अर्को महत्वपूर्ण चाडको पहिलो दिन । दियो बालेर
झिलिमिली पार्दै मनाइने यस चाडलाई दीपाबली पनि भनिन्छ ।
काग तिहारमा कागलाई यमराजको सन्देशबाहकका रुपमा पूजा गर्ने चलन छ । कर्कस
आवाज निकालेर कराउने यस चरालाई अरु बेला अशुद्ध पन्छीका रुपमा मानिन्छ ।
तिहारमा भने यसलाई ठूलो सम्मान दिएर पूजा गरिन्छ । बिहान यसलाई बोलाएर
खानेकुरा खुवाउने गरिन्छ ।
पहिले परेबाले जस्तै कागले सन्देशबाहकका रुपमा चिठ्ठीपत्र आदान प्रदानमा
सघाउने काम गथ्र्यो भन्ने मान्यता छ । यसले यमराजले पठाउने चिठ्ठीहरू
पृथ्वी लोकमा पु¥याउने काम गथ्र्यो भन्ने पौराणिक कहानी सुनिन्छ ।
यमराजले पृथ्वी लोकमा भएका मानिसलगायत सम्पूर्ण जिवित प्राणीको
जन्ममृत्युको बिबरण राख्ने गर्थे । त्यस्तो बिबरण ल्याउने लैजाने काम
आकाशमार्गबाट छिटो गर्ने काम कागले मात्रै गर्न सक्थ्यो । त्यसैले गर्दा
यमराजले कागलाई आफ्नो दूत नियुक्त गरेको जनश्रुती छ ।
कागले घरको धुरीमा बसेर कराउँदा राम्रा/नराम्रा खबर ल्याएको विश्वास
गरिन्छ । काग नजिक आएर कराएपछि कुनै घटना/दुर्घटना छिट्टै हुने विश्वास
गर्नेहरू अझै छन् । घरको नजिक आएर काग कराउन थालेपछि उसलाई ‘शुभ बोल्’
भन्ने गरिन्छ ।
तिहारको कथामा यमराज जोडिएर आउँछन् । उनी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी
(कागतिहार) देखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया (भाइटिका) सम्म पाच दिन यमुनाको
घरमा बस्न गएका थिए । यमराजले बहिनीको निम्तो मानेर उनकै घरमा ती पाँच
दिन रमाइलो गरी मनाएकाले तिहारलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ ।
यमराजकै चाड भएकाले उनको दूत काग लाई पूजा गरेर काग तिहार मनाउन थालिएको
किम्बन्ती छ । कागलाई पूजा गर्दा बर्षभर नराम्रो खबर सुन्नु पर्दैन भन्ने
विश्वास छ । कागले हाम्रो नजिकका फोहर, सडेगलेका चिज खाएर वातावरण स्वच्छ
राख्न पनि सघाउँछ ।
आज बडादशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा । यस दिन धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी बडा दशैंलाई विदा गरिन्छ । आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन दुर्गा अनुस्ठानका सम्पूर्ण कुरा बिसर्जन गरिन्छ । दशैंघरका सम्पूर्ण अवशेष नजिकको नदिमा लगेर सेलाइन्छ । त्यसपछि यस रातभर बत्ती बालेर जाग्राम बस्ने चलन छ । कोजाग्रत पूर्णिमालाई बडा दशैंकै एउटा अंग मानिन्छ । यस दिनलाई लक्ष्मीको धर्ती भ्रमणका दिनका रुपमा छुट्टै रुपमा मनाउने चलन पनि छ ।
जनश्रुतीअनुसार सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मी परापूर्व कालमा बैंकुन्ठमा बस्दाबस्दा उराठ लागेर यसै रात पृथ्वीको भ्रमणमा आएकी थिइन् । आधा रात भएकाले कुनै घरमा मानिस बिउँझै थिएनन् । सबै घरका मानिस बत्ती निभाएर सुतेका थिए । त्यसपछि लक्ष्मी कसको घरमा उज्यालो बालिएको छ ? को बिउँझै बसेको छ ? भनेर हेर्दै हिँड्न थालिन् । एउटा गरिव किसानको घरमा बत्ती बालेको देखेर त्यही घरमा पसिन् । लक्ष्मी त्यस किसानसँग धेरै खुसी भइन् । उनले ति किसानलाई धनधान्यले पूर्ण गरिदिइन् । त्यसपछि त्यसैले लक्ष्मी हरेक बर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन लक्ष्मी पृथ्वीको भ्रमणमा आउने जनविश्वास छ । उनले भ्रमणका क्रममा ‘को जाग्रतः ?’ (को जागै बसेको छ ?) भनेर हेर्ने भएकाले यस पूर्णिमालाई कोजाग्रत पूर्णिमा भनिएको किम्बदन्ती छ ।
उनले जाग्राम बसेर आफ्नो पूजा–आराधना गरिरहेको ब्यक्तिलाई त्यही किसानलाई जस्तै आशीर्वाद दिई धनधान्यले सम्पन्न गरीदिने धार्मिक विश्वासअनुसार रातभर जाग्राम बस्ने प्रचलन चल्दै आएको छ । दशैको टीका यही दिनदेखि सम्पन्न हुने भएकाले घटस्थापनाका दिन राखिएका जमरा विसर्जन गरिन्छ ।
यस दिन हिन्दूमात्र हैन, बौद्धमार्गी भिक्षुहरू समेत धुप बालेर अन्न विज छर्दै देशभरका बिहार, चैत्यको परिक्रमा गर्छन् । कोजाग्रत पूणिमादेखि कात्तिक शुक्ल पूणिमासम्मको एक महिनासम्म साँझ घरघरमा बाँसको टुप्पोमा दियो बाल्ने र आँगनमा तुलसीको मठ सजाएर भगवान विष्णुको पूजाअर्चना गर्ने धार्मिक प्रचलन छ ।
आज बडा दशैंको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन । यो नवरात्रीको दशौं दिन हो । यस दिन दुर्गा भवानी पूजाको विसर्जन गरिन्छ । भगवान रामचन्द्रले बनबासमा महामायाको आह्वान गरी नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेपछि देवीले नवौं रातमा ‘भोलिको दिन मेरो प्रसाद लगाइ अभियान गरेमा राबणमाथि बिजय पाउँछौ’ भनेर सपनामा बताएपछि रामले यस दिन अर्थात आश्विन शुक्ल दशमीका दिन भगवतीको घडाको जलले अभिशेक लिइ भगबतीको प्रसाद टिका, जौका आँकुरा (जमरा) लगाइ बिजय अभियान गरेका थिए । त्यसैले यस दिनलाई बिजया दशमीका नामले पुकार्न थालियो । यस दिन नवरात्रिभर अर्थात नौ दिन पुजा आराधना गरिएकी नवदुर्गा भवानीको पूजा बिसर्जन गरिन्छ । यस दिन सबैले फूल, अक्षता लिएर क्षमा प्रार्थनासाथ घडाको अभिशेक लिएर दुर्गा पूजा बिसर्जन गरेपछि घरको मुल दैलो (ढोका) माथि टिका र जमरा टाँसेर विधि फुकाइन्छ ।
त्यसपछि मान्यजनको हातबाट टिका लगाउने गरिन्छ । उनीहरूले टिका लगाउँदा यस्तो भन्दै आशिष दिन्छन् ।
आयु द्रोण सुते, श्रीयं दशरथे, सत्रु क्षयम् राघवे,
ऐश्वोर्यं नहुशे, गतिस्च पवने, मानंम् च दुर्योधने,
दानम् सुर्य सुते, बलम् हलधरे, सत्यम् च कुन्ती सुते,
बिज्ञाने बिदुरे भवति भवताम किर्तिस्च नारायणे ।
यसको अर्थ द्रोणका छोरा अस्वत्थामाको जस्तो आयु, दशरथको जस्तो कीर्ति, रामको जस्तो अजात सत्रुत्व, नहुसको जस्तो ऐस्वर्य, वायुको जस्तो गति, दुर्योधनको जस्तो मान, सूर्यका छोरा जस्तो दानी, भीमको जस्तो बल, युधिष्ठिर जस्तो सत्यवान्, विदुरको जस्तो ज्ञान, नारायणको जस्तो कीर्ति होओस् भन्ने हो ।
जेठाको रोलबाट घरका परिवारका सदस्यले टिका लगाई सकेपछि पाहुना, कुटुम्ब, इस्टमित्रलाई टिका लगाउने गरिन्छ । आफू पनि मान्य कुटुम्बकहाँ गएर टिका थाप्ने गरिन्छ । मान्यजनका हातबाट टिका थाप्न टाढाटाढाबाट समेत आफन्त आउँछन् ।
यसै चाडले बषौं विछोडिएका आफन्तहरूसँग भेटघाटको अवसर जुटाउँछ । विदेशमा रहेकाहरू समेत जम्मा हुने भएकाले दशैंलाई कुटुम्ब मिलनको चाड पनि भनिन्छ ।
यस संस्कृतिका पछाडि भगवतीको प्रसाद ग्रहण गर्ने धार्मिक भावना मात्र छैन । आफ्ना मान्यजनप्रतिको श्रष्द्धा र आत्मियताको भावना गहिरिएर बसेको पाइन्छ । नेपाली परंपरामा मान्यजनलाई कति महत्व दिइन्छ भन्ने यो चाडले देखाउँछ ।
टिकाको बेला हाम्रो देशमा एउटा विशेष दृष्य देखिन्छ । हैसियतले भेटेसम्म राम्रो लुगा, गहना लगाएका, निधारमा रातो टिका लगाएका, कपालमा जौका पहेंला जमरा सिउरिएका सर्बसाधारण बाटोमा ओहोरदोहोर गरेको दृष्य साँच्चै रमाइलो लाग्छ ।
यसै गरी टीकाको क्रम ५ दिनसम्म चल्छ । वास्तवमा बिजयको हर्षोल्लासमा लगाइने टिका एक दिनको मात्र हो । तर टाढा रहेका आफन्तलाई समेत पर्खने ब्यवहारिकताले गर्दा पूर्णिमासम्म टिका लगाउने गरिएको हो । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा भने टिका दशमीका दिन मात्रै लगाउने चलन छ ।
यसै दिन घरघरबाट खड्ग निकालेर खड्ग जात्रा पनि गरिन्छ । यसलाई बिजयको प्रतीक मानिन्छ । यसै बेला पचली भैरवको जात्रा पनि चलिरहन्छ । पचली भैरव र अस्टमात्रिकाको नृत्य पनि ठाउँठाउँमा देखाइन्छ । बिजयाकै मध्यरातमा पचली भैरवको जात्राका क्रममा राजकीय खड्गको आदान प्रदान हुन्छ ।
देशभर शक्तिस्वरुपा दुर्गा भवानीको पूजाआराधना गरी आज महानवमी पर्व मनाइँदैछ । घटस्थापनाका दिन आआफ्नो घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा महानवमीका दिन विभिन्न शक्तिपीठमा चढाउने गरिन्छ । यस दिन घरघरमा विशेष पूजाअर्चना र दुर्गा सप्तशती पाठ गरिन्छ । यस दिनलाई नेवारी भाषामा स्याक्कोट्याक्को पनि भनिन्छ । यस दिन दुर्गा भवानीलाई जति धेरै बली दिन सक्यो त्यति धेरै पुण्य लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यस दिनलाई नवदुर्गा भवानीले असुरहरूलाई खोजीखोजी, केलाईकेलाई निर्मूल गरेको दिन मानिन्छ ।
भगवतीले असुरको सेनालाई तहसनहस पारेपछि प्राण बचाउन उनीहरूले भेष बदलेर आफूलाई खसी, बोका, भेडा, हाँस, कुखुरा बनाए । नवदुर्गाका नारी सेनाले ती असुरहरूलाई केलाउदैं सबैको बध गरे । त्यसैले यस दिन मौलोमा ती पशुहरूको बली दिने चलन चलेको भनिन्छ । शाकाहारीहरूले भने कुभिन्डो, घिरौंला र मूलालगायतको बलि दिने, नरिवल, पायस चढाउने गर्छन् ।
यस दिन मुलुकभर बर्षभरमा सबैभन्दा बढी बली दिइन्छ । यस दिन देवीका मन्दिर, दशैंघर, कोतको मौलोसहित कलपुर्जा, सवारी साधन, हतियार, मेसिन, कलकारखाना, इन्जिनमा पनि बली दिने चलन छ ।
यस दिनलाई निर्माणका देवता, कालीगढ देवता विश्वकर्माको दिन पनि मानिन्छ । त्यसैले यस दिन हातहतियार, कलपुर्जामा बली दिएर नवदुर्गा भवानीको विसर्जन नभएरसम्म तिनलाई चलाईंदैन । यस दिन पशुबली नदिए हतियारले कुनै न कुनै रुपले दुर्घटना गराएर भोग नखाइ छाड्दैन् भन्ने जनविश्वास छ । सवारी साधनले भए मान्छे किच्ने, कलकारखाना भए दुर्घटना गराउने गर्छन् भन्ने विश्वास छ ।
हनुमानढोकास्थित ऐतिहासिक तलेजु भवानीको मन्दिर सर्वसाधारणको दर्शनका लागि बर्षमा एक पटक महानवमीको दिन मात्र खोलिन्छ । त्यसैले यस दिन त्यहाँ दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्छ ।
पुराणअनुसार महानवमीका दिन चामुण्डादेवीले रक्तबीज असुरको संहार गरेकाले यो पर्वलाई विशेष महत्वका साथ लिइन्छ । आज कोतहरूमा हर्षबढाइँका साथ कोतपूजा र निशान पूजा गरिन्छ । महानवमीका अवसरमा बिहान हनुमानढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक तथा गुल्महरूमा बाजागाजासहित बली दिएर जङ्गी निशानपूजा तथा कोतपूजा गर्ने चलन छ
आज अष्टमी । बडा दशैंको आठौं दिन । यसलाई महाअष्टमी पनि भनिन्छ । यो नेपालीहरूको अर्को ठूलो चाड हो ।
पूजाकोठा, दशैंघर अथवा मण्डपमा वैदिक विधिर्पूवक घटस्थापना गरिएको ठाउँमा महाष्ठमीको दिन विशेष भक्तिर्पूवक पुजाआजा गरिन्छ । यस दिन महामाया भगवतीको अतिरिक्त नवदुर्गा भगवतीको पनि प्रतिमा स्थापना गरेर पूजा आराधना गरिन्छ । घरघरमा राखिएका वा कलकारखानामा रहेका हतियारलाई धोइपखाली महादेबी दुर्गाको हतियारको रुपमा स्थापना गरि पुजा गर्ने गरिन्छ । मध्यरातमा बालिसहित कालरात्रिको पूजा गर्ने चलन छ । यस दि विहानैदेखि देशभरि शक्तिका प्रतीक मानिने महाकाली, महालक्ष्मी र देवी भगवतीका मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको भीड लाग्नगर्छ ।
यस दिन असुरहरूको विनासका लागि जगदम्बा भवानीको अंशबाट नौ वटी दुर्गा शैलपुत्री, ब्रम्हचारिणी, चन्द्रघन्टा, तारा, महाकाली, चामुन्डा, कालरात्री, महागौरी, छिन्नमस्ता आदि प्रकट भएर असुरहरूको बध गरेको प्रतीक स्वरुप बली पूजा गर्ने चलन छ । बलीप्रथा विभत्स देखिन्छ । यद्यपि बली चढाइएका पशुले जन्मान्तरको पशु योनीबाट मुक्ति पाउछन् भन्ने जनविश्वास छ । पशुवली नगर्ने घरमा पनि कुभिन्डोलाई चौपाया पशुको प्रतीक बनाएर बलि दिने चलन छ । बलि दिएको चौपायाको मासुलाई नवदुर्गाको प्रसाद मानेर खाने गरिन्छ । यस दिन खानपिन, नाचगान गरेर रमाइलो गरिन्छ । नयाँ बस्त्र, आभुषण लगाएर पिङ खेल्ने गरिन्छ । यसै दिन मध्यरात्रिमा समेत चन्डमुन्ड कालरात्रीको तान्त्रिक विधिले पूजा गरिन्छ ।
आज बडादशैंको सातौं दिन । सप्तमी तिथिमा पर्ने यस दिनलाई फूलपातीका नामले चिनिन्छ । परम्परागत रुपमा आजका दिन हरेक नेपालीको घर, दशैंघर, शक्तिपिठ, सेना÷प्रहरीको गुल्ममा फूलपाती भित्र्याइन्छ । दुर्गा भवानीको प्रतिमाका साथ जमरा राखिएको कोठामा फूलपातीको शुभसाइत पारेर केरा, दाडिम, धान, मानक, कर्चुर, बेसार, बेल, अशोक र जयन्तीको पातलाई फूलपातीको रुपमा भित्र्याउने गरिन्छ ।
काठमाडौंको बसन्तपुरस्थित दशैंघरमा भने परंपरादेखि गोरखा दरबारबाट फूलपाति ल्याइँदै आएको छ । गोरखाबाट धादिङको जीवनपुरहुँदै काठमाडौंको जमलसम्म ल्याइएको फूलपाती परंपरागत गुरुज्यूको पल्टन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, आशागुर्जा टोली, ब्यान्डबाजा, पञ्चेबाजा, सिङगारिएका कलस्यौलीहरू र सांस्कृतिक झाँकीसहितको समूहले हर्षबढाइँ गर्दै हनुमानढोकास्थित दशैंघरमा भित्र्याउँछ । फूलपाती भित्र्याउने समय पारेर काठमाडौंको टुँडिखेलमा नेपाली सेनाको टुकडीले तोप पड्काउँदै हर्ष बढाईं गर्ने प्रचलन परंपरादेखि चल्दै आएको छ ।
घटस्थापनादेखि दशैं सुरु भए पनि त्यसपछिका ६ दिनमा दशैं आएको खासै अनुभूति हुँदैन । फूलपातीका दिनदेखि भने दसैं सुरु भएको अनुभूति हुन्छ । यस दिनदेखि सार्बजनिक विदा हुने भएकाले घरघरमा विशेष चहलपहल सुरु हुन्छ । फूलपातिदेखि गाउँघरमा पिङ् हाल्ने गरिन्छ । गाउँघरमा रोटेपिङ, लिंगेपिङ हालिएकाले दशैंको रमझम निकै देखिएको छ । दशैं मनाउन घर फर्किनेहरूले यातायातका साधन भरिभराउ छन् ।
काठमाडौंलगायत देशभरिका देवी मन्दिरहरूमा फूलपातीको दिन दर्शन गर्नेहरूको निकै भिड लागेको छ । काठमाडौंमा गुहेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली, दक्षिणकालीगायतका शक्तिपीठमा पूजाअर्चना गरिन्छ । यस्तै काठमाडौं बाहिरका सिन्धुलीको भद्रकाली, कालिमाई र कमलामाई, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, पोखराको बिन्ध्यवासिनी, गोरखाको गोरखकाली र मनकामना, बाग्लुङको कालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता, धरानको दन्तकाली, विराटनगरको कालीमन्दिर, ताप्लेजुङको पाथिभरा, दाङको अम्बिकेश्वरी, डोटीको शैलेश्वरी, रामेछापको खाँडादेवी, मकवानपुरको चुरीयामाई र भुटनदेवीलगायतका शक्तिपीठहरूमा घटस्थापनादेखि दर्शनार्थीको घुर्इंचो लाग्दै आएको छ ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरिएका दशैंघरर शक्तिपीठहरूमा फूलपातीको राति भगवती कालरात्रि देवीको पूजा आराधना गरिदैछ । नवरात्रका नौ दिनसम्म दुर्गाका एक–एक स्वरुपको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ । नवदुर्गाको सातौ रुप कालरात्रि हो ।
काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार परिसरमा मनाइएको इन्द्रजात्राका
विविध झाँकीहरू |
देशभरि धुम धामसंग मनाइयो |
हिन्दू महिलाको महान पर्व तीज
March 22, 2014Uncategorizedgautamsudina
बाला चतुर्दशीको पूर्वसन्ध्या आइतबार साँझ पशुपति मन्दिरपरिसरमा देखिएको दृष्य । बाला चतुर्दशी मेला भर्न मुलुकभर र भारतबाट समेत श्रद्धालु भक्तजन पशुपतिनाथ मन्दिरमा जम्मा भएका छन् । पशुपति मन्दिर परिसर, कैलास डाँडा, स्लेषमान्तक, बनकालीलगायतका सबै ठाउँ भक्तजनले भरिएका छन् । कैलाश डाँडा पालले भरिएका छन् । त्यति फराकिलो पशुपति परिसर कतै खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन । कोही बत्ती बाल्दैछन् । कोही पाल टांग्दै छन् । भिरालो भित्तासमेत समूह मिलाएर बस्नेहरुले खचाखच भरिएको छ ।
March 20, 2014FestivalsColors, Festivals, Holi, NepalAdmin
रंग खेलेर रमाइलो गर्दै आज फागु पुर्णिमा काठमाडौं उपत्यका र पहाडी जिल्लाहरुमा भब्य रुपमा मनाईंदैछ । तराईका जिल्लाहरुमा भने यो चाड भोलिपल्ट मनाइन्छ । रंगिचंगी अविर लगाइदिदै रंग छ्यापाछ्याप गरेर युवायुवती लसडकमा उल्लास पूर्वक होली खेलिरहेका देखिन्छन् ।
त्रेतायुगमा हिरन्यकश्यपु नामक दानवका छोरा प्रल्हाद भगवान विष्णुका भक्त थिए । उनलाई मार्न हिरण्यकस्यपुले धेरै प्रपन्च रचे । केही गर्दा मार्न नसकेपछि उनले आङ्खनै बहिनी होलिकालाई मार्न पठाए । होलिकाले आगोमा नजल्ने बरदान पाएकी थिइन् । त्यसपछि होलिकाले प्रल्हादलाई काखमा लिएर आगोमा बसिन । आगोले प्रल्हादलाई केही गरेन होलिका भनें आगोमा जलेर नष्ट भइन् । त्यसैको खुशियालीमा अविरको होली खेल्दै फागु पूर्णिमा मनाउन थालिएको किम्बदन्ती छ । खासगरी हिन्दु समुदायले यसलाई महत्वपूर्ण चाडका रुपमा लिने गर्छन् । होलीमा रातो, हरियो, पहेलो, निलोलगायतका विभिन्न रंगको टीका लगाइ मनाउने गरिन्छ ।
हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठकमा तीन छत्रे चीर ठड्याएर साताअघि यो पर्व सुरु भएको हो । त्यस चिरलाई तानेर टुँडिखेलमा पुर्याई दाह गरेपछि होली पर्व समाप्त हुन्छ । रङगीचङगी कपडाका टुक्रा झुन्ड्याइएको चीर होलिका रुपी पापप्रवृत्ति जलेर भष्म भएको स्मरणमा प्रत्येक फागु फागुन पूर्णिमामा दाह गर्ने गरिएको गरेको जनविश्वास छ । ईस्वीको चौधौं शताब्दीमा राजा जयस्थिति मल्लको पालामा लेखिएको गोपालराज वंशावलीमा देशमा ठूलो अशान्ति भएकाले पूणिमाको दिन होली उत्सव मनाएपछि देशमा शान्ति स्थापना भएको उल्लेख छ ।
फागु पूणिमाको रातमा टुँडिखेलमा किलागलका ज्यापूहरुले एक मुरी चामलको भात र एउटा सिंगै राँगाको पकाएका मासु लगेर गुरुंमापालाई भात खुवाउने चलन छ । राजधानीको ऐतिहासिक बौद्ध बिहार इटुम्बहालको चुलो बारीमा पकाइएको भात खर्पनको एकापट्टी १५ पाथी र अर्कापट्टी स–साना दुई पेटारो गरी ५ पाथी भात राखी एकजना बलियो मानिसले बोकेर बाजा बजाउँदै टुँडिखेल पुर्याउँछन् । त्यसरी बोकेर ल्याएको भातलाई एकपल्ट न्युरोडको ढोकासँगै रहेको महादेवस्थानमा बिसाई त्यहाँ रहेका लुकेको महादेव लाई एक सानो पेटारोको भात चढाइसकेपछि बाँकी दुई पेटारो टुँडिखेल पुर्याइन्छ । अर्को सानो पेटारोको भात गुरुंमापाको नाममा अलग पन्छाएर इटुम्बहालदेखि सँगै गएका सबैलाई प्रसादका रुपमा खुवाउने चलन छ ।
फागु पर्वमा सरकारले सार्बजनिक विदा दिने गरेको छ । पुर्णिमाको दिन काठमाडौं उपत्यका र पहाडी जिल्लामा विदा हुन्छ । तराई क्षेत्रमा भने त्यसको भोलिपल्ट चाड मनाइने भएकाले त्यसै दिन सार्बजनिक विदा दिइन्छ । तराईका बासिन्दाले यस चाडलाई निकै महत्व दिएर मनाउछन् । यस दिन मिठा परिकारहरु बनाएर आफन्तहरुलाई बोलाएर भोजन गराउने पनि गरिन्छ ।
Source : http://www.hamropatro.com/